Uma imaanayso in wax cusub la yiraahdo laakiin waxay bixisaa: Boqortooyadii Geesiyaasha: Dagaal Xeeladaysan | Androidsis
Boqortooyada Geesiyaasha: Dagaal Xeeladaysan waa ciyaar cusub oo ka timid NEOWIZ inuusan u imaan inuu soo ogaado wax cusub, laakiin inuu muujiyo xirfado aad u wanaagsan wax kasta oo la xiriira dagaalladda salka ku haya.
Beer ka mid ah dagaalka laba geesoodka ah ee boosaska taas oo aan u dhaqaajin doonno geesiyaasheena, waxaan awood u yeelan doonnaa inaan si sax ah ugu gudubno heerarka qaarkood taariikhdooda. Haa waa run oo lama turjumayn, laakiin macnaheedu maaha in ilbidhiqsiyo gudahood aad horeba cadaw ugu wajahayso. U tag.
1 Isu dheellitir dhammaan qeybaheeda
2 U hel Runes halyeeyadaada Boqortooyada Halyeeyada: Dagaal Xeeladaysan
3 Isbaanish ma ahan waqtigaan
Isu dheellitir dhammaan qeybaheeda
Boqortooyada Geesiyaasha: Dagaal xeeladaysan wuxuu ku yimid rabitaanka inuu noqdo ciyaar kale oo dagaal taas oo kolba dhan loo weecdo Waxay noo horseedi doonaan inaan sugno moobiilka AI si aan dhaqdhaqaaqiisa u sameyno. Tani waxay sidoo kale noo ogolaaneysaa inaan qaadano waqtigeenna si aan u go'aansanno mid ka mid ah xubnaheenna kooxda oo dhaqaaqi doona
Oo kuwanuna waa shaashad qaab laba-geesood leh, waxaan awoodi doonnaa inaanu hindiso noocyo kale oo istiraatiijiyad ah oo si habboon ugu socdaalaya wareegyadaas oo heer walba ka kooban yahay. Waxyaabaha qosolka leh ee ku saabsan ciyaartan ayaa ah inay ku dhowdahay waxay nagu qaadaysaa inaan la dagaallano ilbidhiqsiga koowaad; oo aan si fiican uga warqabno inaan wajaheyno mid ka mid ah qodobadiisa.
Sida kale maahan, waa inaad sidoo kale baxdaa Way cadahay in ururinta geesiyaashu ay tahay mid kale oo ka mid ah xoogyadeeda. Xaqiiqdii, markaan ka gudubno heerka koowaad waxaan dhaafi doonaa kahor furitaanka mid kamid ah geesiyaasha si loogu daro kooxdeena labada ah sidaasna waxaan kuheli doonaa kala duwanaansho badan markaan dagaalameyno.
U hel Runes halyeeyadaada Boqortooyada Halyeeyada: Dagaal Xeeladaysan
Sida ciyaaraha kale ee dagaalka RPG ee isweydaarsiga ah waan awoodnaa isticmaal runes si aad u xoojiso awoodaha qaarkood. Halkan waxaa ku yaal kala duwanaansho aad u weyn runtiina waxaan ku laabanaynaa mid kale oo ka mid ah xooggiisa. Waxay si dhakhso leh noo bari doonaan raison d'être ee runes maaddaama ay jiraan saddex cunsur oo noo oggolaan doona inaan la dagaallano cadowga si aan ugu adeegsanno daciifnimadooda.
Boqortooyada Geesiyaasha: Dagaal xeeladeed sidoo kale wuxuu adeegsadaa a qodob muhiim ah sida bulshada annaga oo u oggolaanayna abuuritaanka qabaa'illada oo aan kala dhexgeli karno bulshada si aan boos uga sameysano ciyaartan oo marka hore u muuqata mid aad u wanaagsan.
Oo isku mid ah in ay Nicmada waa suurtagalnimada in la isku daro geesiyaal si loo hagaajiyo; mid kale oo ka mid ah walxaha soo noqnoqda ee tiro aan dhammaad lahayn oo ciyaaro ah oo aan ku leenahay Play Store taasna waa caadi haa haa qaar badan. Halkan waxaa ah shey gunno ah, sidaa darteed soo dhawow inaad ku xoojiso kooxdeena xubna ka wanaagsan.
Isbaanish ma ahan waqtigaan
Haddi hore Tarjumaadaha Ingiriisku gabi ahaanba ma guuleysanWaxa laga sheegayo Isbaanishka oo aan hadda la heli karin. Taasi waa, waa inaan u isticmaalnaa Ingiriis si aan u ogaanno sheekada oo markaa aan u raacno sheekada ciyaarta doorka ciyaarta ee ujeedadeedu tahay inuu noqdo mid ka mid ah kuwa ugu sacab badan bulshada ciyaartoyda Android.
Muuqaal ahaan waxaan ku dhagannahay qaabka dabeecadda iyo jawiyada dagaalada oo aan haba yaraatee xumaan. Sawirada aan arki doonno sidoo kale waxay leeyihiin ujeedkooda iyo in markay yihiin jilayaal cufan runta ayaa ah in hal abuurka farshaxanka ah ee mas'uulka ka ah mashruucan uu leeyahay karti.
Boqortooyada Geesiyaasha: Dagaal Xeeladeed waa RPG oo leh dagaal ku saleysan leexasho in daqiiqada ugu horeysa ay noo ogolaato ciyaar taasna waxay noo horseedi doontaa khibrad ciyaar wacan. Kaliya waxay ku sii jirtaa Isbaanishka si bulshada Hispanic ay ugu fuulaan gaarigaaga oo ay ugu raaxaystaan ​​xiisahaaga. Waanu kaaga tagayn isaga Sheekooyinka BANDAI ee Cretoria dagaalka ku saleysan dagaalka.
Qaybta kowaad wax kasta oo aad ka filan karto ciyaar noocan ah. Dabcan, isagu wax cusub ma allifo.
Dagaalku wax buu leeyahay
Jawiga iyo qaabeynta dabeecadda
Saldhig wanaagsan oo lagu koriyo
Boqortooyada geesiyaasha - RPG
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » Boqortooyada Geesiyaasha: Dagaal Xeeladeed oo hadda la heli karo oo leh dagaalladeeda ku saleysan ku-saleysan iyo geesiyaal badan oo la uruurinayo
Dropbox Android app wuxuu gaarayaa XNUMX bilyan oo soo degsasho ah